စတုရန်းနှင့် စတုဂံပိုက် ထုတ်လုပ်သူများ - China Square and Rectangular Pipe Factory & Suppliers
Square tube ကာဗွန်သံမဏိပိုက်အနက်ရောင်အခေါင်းပေါက်အပိုင်း ကာဗွန်သံမဏိ Q235 စတုရန်းသတ္တုပြွန်
Mအသုံးပြုနေသည်ဖွဲ့စည်းပုံပိုက်၊ ခြံစည်းရိုး/တံခါးပိုက်၊ အဆောက်အဦ၊ ပရိဘောဂစသည်ဖြင့်
Sမျက်နှာစာဆီ၊ အနက်ရောင်၊ အရောင်တင်ဆီ၊ ပူပူနွေးနွေးနှစ်ပြီး သွပ်ရည်စိမ်၊
Packing:ရေစိုခံ ပလပ်စတစ် တာပေါ်လင်အဖုံးဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည်။သံမဏိတံဆိပ်များ
Pငွေပေးချေမှု-L/C သို့မဟုတ် 30% T/T တွင် မြင်နိုင်သည်။
ASTM A53 အပူနှစ်ထားသော သွပ်ရည်ပြားအခေါင်းပေါက် အပိုင်းစကွဲနှင့် စတုဂံစတီးလ်ပိုက်
သွပ်ရည်စတုရန်းစတုရန်းစတီးလ်ပြွန်သည် ဂဟေဆော်ရန်၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ ဖြတ်ရန်နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်ရန် လွယ်ကူသည်၊ ထိုအချိန်တွင် သွပ်ရည်စိမ်ထားသောအပေါ်ယံပိုင်းသည် အခြားကာဗွန်သံမဏိအမျိုးအစားများထက် သံချေးတက်ခြင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်းတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ထို့အပြင်၊ သွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းစတီးပြွန်သည် သံမဏိအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး သံချေးတက်ခြင်းကို အနည်းဆုံး 25 နှစ်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိကာ တာရှည်ခံမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံလွှာများကဲ့သို့ တူညီသောခိုင်ခံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
Hot Dipped Galvanized Structural Square Tubing ၊
1.HSS တွင် မြင့်မားသော ခွန်အားမှ အလေးချိန်အချိုး၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော ဖိသိပ်မှု ပံ့ပိုးမှု လက္ခဏာများနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော torsional resistance ရှိသည်။
2. ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အထူးသဖြင့် Architecturally Exposed Structural Steel (AESS) အက်ပလီကေးရှင်းများတွင် HSS သည် အဆောက်အဦများနှင့် အခြားအဆောက်အဦများ၏ ဒီဇိုင်းအတွက် နှစ်သက်ဖွယ်မြင်သာသောအခွင့်အရေးများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
3.HSS သည် အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် သည်းခံနိုင်မှုတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် OEM အပလီကေးရှင်းများ တောင်းဆိုမှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
4.HSS ကို အလွယ်တကူ ကွေးနိုင်၊ ဖွဲ့စည်းနိုင်၊ အပေါက်ဖောက်ပြီး တူးနိုင်ပါသည်။HSS ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အခြားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို ချိတ်ခြင်းအတွက် ချိတ်ဆက်မှုဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများသည် နယ်ပယ်တွင် တီထွင်ဖန်တီးမှုလွယ်ကူမှုကိုလည်း တိုးတက်စေသည်။
5. အထူးသဖြင့် A1085 တွင် ၎င်း၏ပိုမိုခိုင်ခံ့မှုအချိုးကြောင့်၊ HSS သည် အခြားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်သည်။ပိုမိုကောင်းမွန်သော ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ချိတ်ဆွဲနည်းများဖြင့်၊ ၎င်းသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုကို မကြာခဏခံစားရသည်။
6.HSS သည် မီးခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ပူခြင်း၊ လိမ်ခြင်း၊ ကွဲခြင်း၊ ဖောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကျုံ့ခြင်း မရှိပါ။